HomeလောကASIA မှ81 ဂျပန်ဂျပန် 27 နိုင်ငံဖုံးအုပ်စက်ဘီးခရီးစဉ်အားဖြင့်ရောက်ရှိ
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 81 ဂျပန်, ASIA မှ, လောက, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ 0
ရပ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလားတရားဝင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမိတ်ဖက် DHL 2019, ဂျပန်ဖြစ်ပြီး, ဖွင့်ပွဲအဖြစ်အပျက်နှင့်အတူစတင်တိုကျိုအားကစားကွင်းမှာရုရှား၌ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ DHL ကထောက်ခံနှစ်ဦးကစက်ဘီးစီး, တူရကီကမ္ဘာ့ဖလားအင်္ဂလန်ကနေဂျပန်ကိုပြောင်းရွေ့တည်ခင်းဧည်သောစိန်ခေါ်မှုခရီး 7,5 ခဲ့ရာမှပြီးခဲ့သည့်လများနှင့် 27 2015 နိုင်ငံများအကြားပွဲစဉ်များစတင်ပီပီ၏ကြာချိန်။
DHL နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ 2019 နှစ်ခုစက်ဘီးစီးတွင် Ron RUTLAND နဲ့ James Owen စတင်ခဲ့သောထူးခြားတဲ့ခရီးကထောက်ခံ, 7,5 27 လအတွင်းတိုင်းပြည်မှတဆင့်ဂျပန်ရပ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလားတရားဝင်ပွဲကနဦးပီပီတိုကျိုအားကစားကွင်းအထဲကသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ဒီစွန့်စားခရီးအတွက်စက်ဘီးစီးလန်ဒန်မြို့တွင်စတင်ခဲ့ပြီးရာကျော်ကီလိုမီတာအတွင်း 20.000 စုစုပေါင်းအကွာအဝေးအတွင်းရှိကတောင်းဆိုရာသီဥတုနှင့်လမ်းခွအေနမြေားကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်။ တူရကီတို့ပါဝင်သည်ကြောင်းလမ်းကြောင်းအပေါ်စက်ဘီးစီး, Edirne မတ်လ 6-8 အကြားအစ္စတန်ဘူလ်အတွက် logging ပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗန်, ထိုနယ်စပ်ဂိတ်နဲ့ James Owen ထံမှ ထွက်. ဧပြီလKapıköyတွင် Ron RUTLAND ၏အစအဦးမှပူးတွဲအားကစားမေတ္တာလမ်း ChildFund Pass ကိုဒါဟာသို့ပြန်သွားရန်တလွှားသားသမီးများ၏ဘဝများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အာဏာကိုယုံနဲ့အသိအမြင်ကိုဖန်တီးရန်အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
DHL, ရပ်ဂ်ဘီနှင့်အတူဖလားအတွက်ပါဝင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှဂျပန်အတွက်ရပ်ဘီကမ္ဘာ့ဖလား၏တရားဝင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမိတ်ဖက်များနှင့် 20 67 တန်ချိန်စုစုပေါင်းအလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများဂျပန်တွင်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်သယ်ဆောင်။
Uzungöl'deနှင့်Sümela'nınအပါအဝင်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းအတွက်မိတ်ဖက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် 17 / 10 / 2012 ပူးတွဲကေဘယ်လ်ကားUzungöl'deဆောက်လုပ်ရေး, ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းနှင့်စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်သာတည်ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Necdet Kerem နှင့်အတူ Trabzon ŞükrüFettahoğluစီးပွားရေးသမား။ နေကြပါပြီ။ Ltd. , ကာလသား, အUzungöl'deနှင့်Sümela'nınအကောင်အထည်ဖော်ရန်မနေ့ကလကျကိုခါအပါအဝင်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းဝန်ကြီးအာဒိုဂန် Bayraktar, ထိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါက်တာ၏ Trabzon အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး Recep Cranberry, မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Trabzon ဒေါက်တာ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတက်ရောက်တဲ့အခမ်းအနားမှာ Speaking Orhan Fevzi Gümrükçüoğluနှင့် PJC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Cetin Oktay လမ်းဘေး Recep Cranberry, Trabzon, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသိသိသာသာဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ Cranberry အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, "ဒီတစ်ခုအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူခရီးသွားကဏ္ဍ၏အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်အရေးပါတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျှဝေဖို့ ...
အဆိုပါ Haydarpasa ရထားဘူတာကိုဖုံးအုပ်ထားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်တွင်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်တုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ် 02 / 02 / 2012 သမိုင်းဝင် Haydarpasa မီးရထားဘူတာရုံကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်ယဉ်ကျေးမှုအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဧရိယာ၌နေရာထိုင်ခင်းအဖြစ်ဆွေးနွေးမှု၏ခွဲခြာအတွက်အတူတကွဆောင်ခဲ့လေ၏။ Plan ကိုတည်ဆဲဘူတာရုံအဆောက်အဦ၏မြေညီထပ်တွင်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်ကြိုမြင်။ သို့သော်အထက်ကြမ်းပြင်ပေါ်, ရုံးကြောင်း TCDD သုံးတတ်၏ ပြတိုက်, ဖျော်ဖြေပွဲ, ပြပွဲခန်းမ, ယဉ်ကျေးမှုအဆောက်အဦများနှင့်ဧရိယာ၌နေရာထိုင်ခင်းအဖြစ်အစေခံပါလိမ့်မယ်။ ဇုံအစီအစဉ်သည်အစွန်းရောက်အသေးစိတ်ကိုရောက်ရှိသည့်စီးတီးကောင်စီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ယခုသူဆိုင်းငံ့ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ဒီ Haydarpasa စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရသိရသည်ပွငျဆငျပါလိမ့်မည်။ Haydarpasa မီးရထားဘူတာစိုးရိမ်နေကြကြောင်းသဘောတူပညာရှင်တွေရဲ့၏ function ကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ Cemal Gokce / မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသမ္မတလူအတော်များများအစ္စတန်ဘူလ်မှပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုမျက်မြင် ...
6 တစ်နှစ်ပြီးစီးမှုကိုခံရဖို့ Mus span မြန်နှုန်းမီးရထားစီမံကိန်း။ 09 / 02 / 2012 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, အစည်းအဝေး Mus ကျင်းပခဲ့သည် '' Bingöl-Muşမီးရထားစီမံကိန်း, Erzincan နှင့် Tunceli က 'ဖွငျ့လိမ့်မည်။ အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ပေါင်ဘီလီယံကိုညွှန်ပြသန်းတစ်နှစ်62 460 ကြောင်းပြီးစီးလိမ့်မည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်မြို့ပြစီးတီး Manager ကို Metin Ilhan, Varto ခရိုင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေး Manager ကိုအီမာမ် Karahan ၏အစည်းအဝေးတွေမှာပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှု, MGS စီမံကိန်းအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ Mehmet Yalcin, ပတ်ဝန်းကျင်၏ညွှန်ကြားမှုနှင့်မြို့ပြစီးတီးအင်ဂျင်နီယာများတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ပေါင်း 2012 2017 '' Erzincan နှင့် Tunceli, Bingöl-Muşမီးရထားစီမံကိန်း '' အကြားစီစဉ်ထားခြင်းနှင့် Erzincan ၏ရလဒ်အဖြစ်Muş 73 မိနစ်ကနေပြုတ်ကျသည်အထိကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးတည်ရှိသော Mus, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ...
အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းရထားကွန်ယက်၏ထိုင်ဝမ်အားလုံးနိုင်ငံများယက် 14 / 11 / 2012 ထိုင်ဝမ် high-speed ကိုရထားဝယ်ယူမှုအရှိန်သိရသည်။4ဂျပန်ကနေရောက်ရှိလာရထားထံမှလက်ခံရရှိခဲ့သည်အစောပိုင်း 2013 အတွက်ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာထိုင်ဝမ်၌သူ၏ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်အတူအာရုံကိုဆွဲဆောင်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဂျပန်ထိုင်ဝမ်ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှတက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်4228,2 သန်းဒေါ်လာစျေးငွေပမာဏကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ 48 လှည်းရထားပါဝင်ပါသည်။ အစာရှောင်ခြင်းရထားအထူးသဖြင့် Changhua ၏ Miolin နှင့် Yunlin xnumx't စီစဉ်ထားဘူတာရုံများတွင်အသုံးပြုရမည့်ပြည်နယ်များမှဖွင့်လှစ်။ ထိုင်ဝမ်အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထား (THSRC) ပြီးသား 2015 12 လှည်းရထားပါဝင်သည်ဟုဦးချင်းစီရှိသည်။ 30 တထောင်ကလူနေ့စဉ်ရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 120 တထောင်ပယ်တနင်္ဂနွေ၏အရေအတွက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ...
အဆိုပါ Haydarpasa ရထားဘူတာကိုဖုံးအုပ်ထားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်တွင်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်တုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်
6 တစ်နှစ်ပြီးစီးမှုကိုခံရဖို့ Mus span မြန်နှုန်းမီးရထားစီမံကိန်း။
ဝန်ကြီးချုပ် Yildirim ကျနော်တို့ထွအဖြစ် YHT လိုင်းနှင့်အတူနိုင်ငံဇာပန်းထည်
ဝန်ကြီး Arslan, နိုင်ငံသိုးမွှေးထိုးကျနော်တို့သံကွန်ယက်နှင့်အတူဆက်လက်ပါနဲ့
တံတားနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတိုင်းပြည်တက် messed လိမ့်မည်!